AMNESTY: Africom waxay Moodaa in Qof weliba oo ay disho uu yahay Al-Shabaab. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
AMNESTY: Africom waxay Moodaa in Qof weliba oo ay disho uu yahay Al-Shabaab.
Last updated Apr 2, 2020 517 0
Maraykanku wuxuu si indha la’aan ah u beegsanayaa dadka Shacabka ah.
Warbixin cusub oo ay soo saartay hay’adda Amnesty International ee sheegata iney u dooda Xuquuqda Aadanaha ayay ku sheegtay in weli ay Soomaaliya ay ka socdaan xasuuqa ay geysanayaan diyaaradaha Maraykanka, kuwaas oo si ula kac ah u beegsada dadka shacabka ah.
Warbixintan waxaa lagu soo qaatay labo dhacdo oo duqeymo ah oo uu Maraykanku sanadkan cusub ee 2020-ka ka fuliyay magaalada Jilib iyo duleedkeeda, kuwaas oo lagu dilay dad shacab ah, walow uu Maraykanku ku faaney inuu diley dagaalyahanno katirsan Al-Shabaab.
“Africom kuma guul dareysan oo keliya iney daaha ka rogo khasaaraha dadka shacabka ah kasoo gaaraya howlgalladeeda, waxayna u muuqataa kuwa aan waxba ka gelin qoysaska ay noloshoodu gebi ahaanba burbureyso” ayaa lagu yiri warbixinta cusub ee Amnesty.
Warbixintu waxay gebi ahaanba laashey misdaaqiyadda ciidamada Maraykanka ee qaaradda Africa, iyadoona ku waanisay taliska Africom inuu ku sifoobo misdaaqiyad, si xilkasanimo lehna u sheego khasaaraha dadka shacabka ah ku gaaraya duqeymaha ay ka geysanayaan Soomaaliya.
Amnesty waxay sheegtay iney ogaatay in labo duqeyn oo bishii February, diyaaradaha Maraykanku ka geysteen Jubbada hoose ay ku dileen labo ruux, sidoo kalena ay ku dhaawaceen saddex qof oo kale.
Nuurto Kuusow Cumar Abuukar, oo 18 jir ah ayuu Maraykanku ku diley Jilib, xilli iyada iyo qoyskeeda ay casheynayeen, waxayna warbixintu sheegeysaa in si xun ay u dhimatay Nuurto, sidoo kalena ay dhaawacmeen labo gabhood oo iyada la dhalatay, laguna kala magacaabo Faaduma iyo Cadeey.
Khadiija Muxamad Geedow oo iyaduna ah ayeeyo 70 jir ah ayaa ku dhaawacantay duqeyntaas, waxayna Amnesty la hadashey xubno katirsan qoyska gabadhooda ay Maraykanku dileen, tiro iyaga kamid ah ayna dhaawaceen.
Kuusow Cumar Abuukar oo aabe u ah Nuurto, sidoo kalena ay hooyadiisu tahay Khadiija ayaa sheegay in gantaalka kusoo dhacay guriga uu ahaa mid aanu weligiisa arkin, islamarkaana suureysan, wuxuuna sheegay in weli ay ku noolyihiin naxdin joogta ah.
Kiiska labaad ee ay soo gudbisay warbixinta Amnesty, waa duqeyn wuxuushnimo ah oo uu Maraykanku ka fuliyay meel duleedka ka ah magaalada Jilib, taas oo lagu dilay Maxmuud Salaad Maxmuud oo 53 jir ah, ahaana maamulihii shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee Jilib.
Waxay Warbixintu sheegeysaa in Maxmuud uu ifka kaga tagay xaas iyo 8 caruur ah, xilliga la beegsanayayna uu ku sugnaa beer uu ku lahaa deegaanka Kumbareere oo qiyaastii 10km ka fog magaalada Jilib.
Amnesty waxay soo bandhigtay sawirka Maxmuud iyo ID carkii shaqadiisa, waxayna sheegtay inuu ahaa qof shacab ah oo aan ku lug lahayn Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Maamulihii Shirkadda Hormuud ee Jilib oo uu Maraykanku diley.
Warbixintan ayaa qeyb ka ah warbixinno hore oo ay soo saartay Amnesty International, kuna sheegtay in Maraykanku uu koonfurta Soomaaliya ka wado duqeymo aan loo meel dayin oo uu ku beegsanayo dadka shacabka ah, waxaana mar weliba ay Africom beenisaa in dad shacab ah ay wax ku noqdaan duqeymaha ay geysanayaan.